သနပ်ခါးမေ: Babyliss Curl Secret ကို လက်တည့်စမ်းခြင်း
Thu February 9, 2015 at 12:16 AM
ဆံပင်ကို အစမ်းကောက်ရင် ၁ရက်ပဲခံတယ်.အသေကောက်တုန်းကလဲ ခဏပဲရတယ်..
ဆံသားကအရမ်းသေးပြီး ပျော့လွန်းလို့.. ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။
ခုစက်လေးက မဆိုးဘူးနော်။ဈေးလေးပါ ပြောပြရင်ပိုကောင်းမယ် :D
Thu February 9, 2015 at 12:18 AM
ချောဒီး.. အပေါ်ဆုံးကပုံကိုသေချာမကြည့်ဘူး။ဈေးနှုန်းပါသားပဲ။249ဆိုတော့ ဟဲဟဲ :P
-မြတ်ကြည် thanakharmay February 9, 2015 at 2:18 AM
အလားတူ ၃ သောင်းတန် လေးတွေလည်း online store မှာ ရောင်းတာတွေ့တယ်။ ဒီက ရွပြီး အဒေါ်နဲ့ မှာလိုက်မိလို့။ မြတ်ကြည်ဖုန်းနံပတ် မှတ်ထားတာ - 09253071197
Ma Tint February 9, 2015 at 7:33 PM
တီတင့်ရဲ့ ဗျူးတီးစလွန်းအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ အတော်များများဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ မြတ်ကြည်လေးရေ.... ♥♥♥
-မြတ်ကြည် thanakharmay February 9, 2015 at 10:27 PM
ဟုတ် တီတင့် အမြဲလာ အားပေးလို့ ကျေးကျေး :)
တိမ်လွှာဖြူ February 10, 2015 at 2:54 AM
လှတယ်..။ ဆံပင်ကောက်တာတော့ သဘောကျတယ်.။ :D
**~ မြတ်ကြည်~** February 10, 2015 at 6:56 PM
Snow ရေ ကျေးဇူးပါ။ :)
Adora etc. February 10, 2015 at 5:49 PM
sis yay.. I was wondering how does it work. Thank you for the review..
**~ မြတ်ကြည်~** February 10, 2015 at 6:57 PM
Fraaah Formyat Lay..
I bought from online after read your review. It was cheap $30 only but the curl does not last long.
-မြတ်ကြည် thanakharmay April 15, 2015 at 5:45 PM
မျက်နှာပေါ်က စုတ်ချက်များ (What is what?)